Waxaan bixinayaa tabobarkan otomaatiga ah si uu ku caawiyo wakhtigan adag, waxaan rajaynayaa inay kaa caawiso inaad kaydsato wakhti (iyo lacag)!
> KU SAABSAN HACK
99% bilowga guuleysta waxaa loo tababaray jabinta koritaanka, adiguna adigu?
Kordhinta kobcintu maahan qalab, farsamooyin, haakis ... laakiin aqoonta istiraatiijiyadeed ee kuu oggolaanaysa inaad ka hesho faa'iido tartan ka dhan ah tartanka, si dhakhso leh u socoto, adoo si fiican u shaqeynaya.
Erey ahaan, koritaanku waa farshaxanka waxtarka leh : dadaalka ugu yar ee saameynta ugu badan ee ganacsiga.
Dhammaan tababarkayga waxaa laga heli karaa degelkeyga gaarka ah, waad iska qori kartaa waxyaabo kale oo badan oo bilaash ah haddii aad rabto inaad intaa ka sii badato ...
HAGAHA MUHIIMKA AH EE AQOONSIGA [XEER LA'AAN] Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
horeSidee loo bilaabaa ganacsi khadka tooska ah lagu sameeyaa oo lagu kasbadaa?
socdaTababbarka Emailka (koorsada 1)
Lacagta iyo habka lacag bixinta